I-Picts yayiyi-amalgam yezizwe ezazihlala kwimimandla yasempuma nasenyakatho yeMpuma yeScotland ngexesha langaphambili lexesha elidala, lidibanisa namanye abantu malunga nekhulu leshumi.
Imvelaphi ye-Picts iyatshatyalaliswa ngokukhawuleza: iminye imfundiso yeengcamango ezazisungulwa zezizwe ezazingaphambi kokufika kwamaCelt eBrithani , kodwa abanye abahlalutyi bacacisa ukuba mhlawumbi babebebebebe baseCelt.
Ukubambisana kwezizwe kwi-Picts kusenokwenzeka ukuba kwakusabela kumsebenzi wamaRoma eBrithani. Ulwimi lusempikiswano ngokufanayo, njengoko kungekho sivumelwano nokuba ngaba bathetha uhlobo oluthile lweCeltic okanye into emdala. Ukubhalwa kwabo kokuqala kubhalwe ngu-orator wase-Eumenius wase-Roma ngo-297 CE, owakhulume nabo behlasela iWoldrian Wall. Ukwahlukana phakathi kwePikts kunye neBrithoni bayaphikisana, kunye neminye imisebenzi ebalaselisa ukufana kwazo, ukungafani kwamanye; Nangona kunjalo, ngekhulu lesibhozo, aba babini bacingelwa ukuba bahluke kubamelwane babo.
I-Picts namaRoma babe nolwalamano lwemfazwe rhoqo, kwaye oku akuzange kuguqulwe kakhulu nabamelwane babo emva kokuba amaRoma asuke eBrithani. Ngenkulungwane yesibhozo, iintlanga zasePutt zazidibanisene kunye nommandla ogama luthiwa yi-'Ptland ', kunye neenombolo ezihlukeneyo zombuso. Ngamanye amaxesha bakhayisa kwaye babulawula izikumkani ezingummelwane, ezifana noDál Riada.
Ngeli xesha le ngqiqo ye-'Ctishness 'inokuvela phakathi kwabantu, ingqiqo yokuba bahluke kubamelwane babo abadala abangekho ngaphambili. Ngalesi nqanaba ubuKristu befikile kwi-Picts kunye nokuguqulwa kwenzeka; kwakukho iindwendwe ePortmahomack eTarbat ngethuba le-7 ukuya kwekhulu lesithoba.
Ngo-843 uKumkani waseScots, uCínaed mac Ailpín (uKenneth I MacAlpin), waba nguKumkani we-Picts, kwaye kungekudala emva kweemimandla zombini kunye omnye umbuso othiwa ngu-Alba, apho iSkotland yavela khona. Izizwana zala mazwe zidibanisene ndawonye zibe yiScots.
Abantu abaPeinted and Art
Asazi ukuba yii Picts ezizibiza zona. Kunoko, sinalo igama elingafumaneka kwi-picti yesiLatini, oku kuthetha 'ipeyinti'. Ezinye izicatshulwa zobungqina, njengegama lesi-Ireland le-Picts, elithi 'Cruithne', elithetha 'upende' lisikholelwa ukuba i-Picts yenza umzobo womzimba, ukuba ingabonakali. I-Picts yayinesitayela esicacileyo sobuciko ehlala kwimifanekiso kunye nezitye. UProfesa uMartin Carver ucatshulwe esithi:
"Babengumculi obalaseleyo. Baya kufaka ingcuka, i-salmon, ukhozi kwisiqwenga samatye kunye nomgca omnye kunye nokuvelisa umbala omhle wemvelo. Akukho nto efana nale nto ifumaneka phakathi kwePorthomhomack neRoma. Kwaye ama-Anglo-Saxon awazange enze imifanekiso yamatye, kunye ne-Picts, enza. Kuze kube yilapho i-Post-Renaissance abantu bekwazi ukuwela udidi lwezilwanyana ezifana naleyo. "(Kucatshulwe kwiphephandaba le-Independent online)
Iikhokeli eziphambili kwiMbali yaseYurophu
Kubaba, Indlovukazi Phakathi KweeKumkani
Ukukhetha Ikhowudi yomSebenzi yeShedyuli C yoBuchule boBugcisa / yezandla
I-# 1 Iingoma eziphambili kuma-50s, ama-60s, nee-70s
Ngaba Kuyinto Elula Kwisakhono se-Roller okanye i-Inline Skate?
Indlela yokufumana umsebenzi kwiKholeji
Uyenza njani umbala omhlophe usebenzisa i-Paint Watercolor?
Iimbala zokupheka zemibala
I-20 ye-Sexy Country Love Songs
Iindaba ezi-10 zeendaba eziphezulu ze-2000s
Ukuqonda Inkcazo epheleleyo ye "Auto" Prefix kwi Biology
Iimpawu zeKrisimesi ngabaBhali abaBhaliweyo